Home Wararka Gudaha Daawo:- Muqaal” Xisbiga Kulmiye oo maamuusaya 20-sano guurada kasoo wareegtay markii la...
Daawo:- Muqaal” Xisbiga Kulmiye oo maamuusaya 20-sano guurada kasoo wareegtay markii la aasaasay.
Magaalada Hargeysa waxaa ka socota munaasabad lagu maamuusayo aasaaska Xisbiga talada Somaliland haya ee Kulmiye, waxaa goobjoog ka ah madaxda sare ee xisbigaas, wakiilada gobollada iyo qaar kamid ah Dadka taageera.
Xisbiga Kulmiye ee talada haya ayaa labo jeer ku guuleystay Xilka Madaxweynaha Somaliland waxa uu ku faanayaa in mar saddexaad suuragal tahay in uu ku guuleysto Doorashda la filayo in ay dhacdo.
“Xisbiga KULMIYE waa dimuqraadi, waxa soo maray oo iska beddelay 12 Guddoomiye oo tartan iyo codayn ku yimid xilalka, mararka qaarkood doorashayinkii ugu adkaa ayaa soo maray KULMIYE dhexdiisa” Sidaasi waxaa yiri Madaxweyne Muuse Biixi.
Madaxweynaha Somaliland ahna Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dhawaan ay dooran doonaan Guddoomiye si uu Xisbigaas ugu diyaargaroobo Doorashada guud ee Somaliland.
“Dhawaan xisbiga KULMIYE waxa uu dooran doonaa Guddoomiye, waxaan idiin sheegayaa in aan KULMIYE isku khilaafi doonin doorashadaas ee uu wixiisa dibadda ku soo dhammaysan doono” ayuu yiri Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Aamina Maxamuud Jirde, Marwada Madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinlaayo ayaa sheegtay in Xisbiga KULMIYE uu dedaal xooggan geliyay sidii uu xijisan lahaa booska koowaad sida ay hadalka u dhigtay.
Previous articleAc Milan Oo Ku Guulaystay Horyaalka Serie A-da Markii Ugu Horaysay 10 Sano Kadib
Next articleShil sababay dhimashada 2 Arday & dhaawaca 42 kale oo ka dhacay Turkiga